ဒီမိုကရေစီ ဖတ်စာ (၁) – Dr. Jerry Dean Epps (ဘာသာပြန်) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Editor's Choice » ဒီမိုကရေစီ ဖတ်စာ (၁) – Dr. Jerry Dean Epps (ဘာသာပြန်)
Posted by မြစပဲရိုး on Mar 10, 2012 in Editor's Choice, Society & Lifestyle | 31 comments
ကျောင်းသူ/ကျောင်းသားတွေ အတွက် ဒီမိုကရေစီ အကြောင်း ကို ပုံပြင်လေးနဲ့ ပြောထား တဲ့ The Democracy ဆိုတဲ့ စာအုပ် ကလေးပါ။
ဒီစာအုပ်ကို ရေးသားတဲ့ Dr. Jerry Dean Epps, (Ph. D. in Human Services, M.A. in Sociology, B.A. in education) ဟာ အမေရိကန်မှာ နေထိုင်ပြီး တက္ကသိုလ် ဆရာ လဲ ဖြစ်၊ အတိုင်ပင်ခံပညာရှင် လဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သူဟာ အမေရိကန် က 9/11 ဖြစ်ရပ် အပြီးမှာ အဲဒီလို အကြမ်းဖက်မှုမျိုးတွေကို ဘယ်လို ရပ်အောင် လုပ် ရမလဲဆိုတာကို စဉ်းစားရင်း ဒီစာအုပ်ကိုရေး ခဲ့ပါတယ်။
သူ့ရဲ့ ယုံကြည် ချက် ကတော့ လူတွေဟာ
ကိုယ့်နေတဲ့နေရာမှာ ကောင်းကောင်း ရှင်သန် ခွင့်ရခဲ့ရင်၊
ငွေကြေး အတွက် မပူပင်ရရင်၊
ကိုယ့်စိတ်ဆန္ဒတွေ ကိုဖော်ထုတ်ခွင့် ရနေခဲ့ရင်၊
နိုင်ငံရေးမှာ လွတ်လပ်ခွင့် ရနေခဲ့ရင်
အဲဒီလူတွေဟာ အကြမ်းဖက်မှု တွေမှာ ပါဝင်ဖို့ စိတ် ကူး မှာ မဟုတ် ပါဘူး။
ပြည်သူအများမှ အပြောင်းအလဲကို လိုလားရန်သာ အဓိက ဖြစ်ပါ တယ်။ ဒီအပြောင်းအလဲက ကောင်းကျိုးရလာဒ်တွေကို တကမ္ဘာလုံးမှာ ခံစားနိုင် ပါလိမ့်မယ်။ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ် တဲ့ အာဏာရှင်တွေကို ဒီမိုကရေစီ စနစ်က အစားထိုး ပါလိမ့်မယ်။
ဒီအတွက် ဒီစာအုပ်ကို ကမ္ဘာအနှံ့မှာရှိတဲ့ ကျောင်း သူ/သားတွေ ဖို့ သူက အလကား ဖြန့်ဝေ ပေးခဲ့ပါတယ်။
လူသားအားလုံး အဖိနှိပ်ခံဘဝ မှ လွတ်မြောက်ရေး အတွက် ဒီစာအုပ်ကို သူရေးပြီး ဖြန့်ဝေခဲ့တာပါ။ မူရင်း စာအုပ်ကို လိုချင်ရင် http://www.teachdemocracy.org/ မှာ ရ ယူနိုင်ပါ တယ်။ ဒီအထဲက စာများကို ဖြန့်လိုပါက Dr. Jerry Dean Epps ကို စာရေးသူ အဖြစ်ဖော်ပြပေးဖို့ မမေ့ကြ စေရန် ကိုလဲ ပန်ကြားပါတယ်။
အမှားအယွင်း ရှိခဲ့ပါက ဘာသာပြန်သူ ကျွန်မ ရဲ့ အပြစ်သာဖြစ်ပါတယ်။
ပထမဆုံး သူပြောတဲ့ စာအုပ်နိဒါန်း နဲ့ ဒီမိုကရေစီ ရဲ့ အခြေခံသဘော များ (၁၈ချက်) ကို ဖော်ပြသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော့ သူရဲကောင်းများ သို့
လွတ်မြောက်ရေး အတွက် သတ္တိရှိရှိ ရပ်တည်ပေးခဲ့သူများ အားလုံးသို့ ……
တစ်ချို့ က စစ်မြေပြင်မှာ
တစ်ခြားသူတွေ က လူအခွင့်အရေး တိုက်ပွဲ တွေမှာ
တစ်ချို့ က သူတို့ တိုင်းပြည် အတွက်
တစ်ခြားသူတွေ က သူတို့ အဖွဲ့အစည်း အတွက်
မနှစ်မျို့ဖွယ်ရာ ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ် မှု တွေ ဖြစ်တိုင်း
အဲဒီမှာ ရဲဝံ့ တဲ့ စိတ်ဓာတ် ရှိသူတွေဟာ
လွတ်လပ်မှု အတွက် အဖြေရှာခဲ့ကြတယ်။
ကျွန်တော် သူတို့ ကို ဦးညွတ်ပါတယ်။
ကျွန်တော့ နှလုံးသားထဲ မှာတော့
သူတို့ဟာ သူရဲကောင်း တွေပါဘဲ။
တစ်ချို့ က အဲဒီ အဖြေ ကို သူတို့ဘဝ၊ အသက်သွေး တွေ ပေးဆပ်ပြီး ရှာပေးခဲ့တာပါ။
တစ်ချို့ ကတော့ ရက်စက်ယုတ်မာလှတဲ့ အုပ်ချုပ်သူ တွေ ရဲ့ အာဏာပြဖိနှိပ် ခြင်းတွေ ကို ဖယ်ရှားဖို့ သူတို့ ဘဝကို စတေးခဲ့ရပါတယ်။
သူတို့တွေ ကို ဒီစာအုပ်နဲ့ ဂုဏ်ပြုလိုက်ပါတယ်။
သမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာ ဒီသူရဲကောင်း တွေဟာ လွတ်လပ်ခြင်း အတွက် မားမား မတ်မတ် ရပ်တည်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။
အခုချိန် မှာတော့ ဒီစိမ်ခေါ်မှုတွေကို ဖြေဆိုပေးဖို့ အတွက် ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ အလှည့်ပါဘဲ။
ပိုပြီး ကောင်းမွန်တိုးတက်တဲ့ လွတ်လပ်မှု အတွက် ကျွန်တော် ဒီစာအုပ်ကို မျှဝေပါတယ်။
ဒီကနေ ကမ္ဘာတဝှမ်း ဒီမိုကရေစီ ပြန့်နှံ့စေရန် အထောက်အပံ့ ဖြစ်စေမယ် လို့မျှော်လင့် ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်ရဲ့ ဖြစ်စဉ် အဆင့်ဆင့် မှာ ကူညီပေးသူ အားလုံးကို လဲ ကျွန်တော် ဂုဏ်ပြု ပါတယ်။ ကျွန်တော့ဇနီး နဲ့ ဒီ Project ပြီးမြောက်အောင် တိုက်တွန်း အားပေးပံ့ပိုး ပေးသူ မိတ်ဆွေ များ ကိုလဲ အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အခြေခံသဘော (၁) – ဒီမိုကရေစီနည်းကျ အခြေခံဥပဒေကို တန်ဖိုးထားသော လွတ်လပ်မှုဖြင့် နေထိုင်ရသော ဘဝ သည် ပို၍ကောင်း၏။
အခြေခံသဘော (၂) – လူတိုင်း ညီတူညီမျှ ဖြစ်သည်။
အခြေခံသဘော (၃) – လူတိုင်း အရေးကြီး သည်။
အခြေခံသဘော (၅) – မဲဆန္ဒ ဖြင့် ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ပြုလုပ်သည်။
အခြေခံသဘော (၈) – လူအများစုမှ ပြဌာန်းသည့် ဥပဒေ ကို မကြိုက်သော်လည်း လိုက်နာရမည်။
အခြေခံသဘော (၁) – ဒီမိုကရေစီနည်းကျ အခြေခံဥပဒေကို တန်ဖိုးထားသော လွတ်လပ် မှုဖြင့် နေထိုင်ရသော ဘဝ သည် ပို၍ကောင်း၏။
ပြည်သူ လူထု များ သည် လွတ်လပ်ခြင်း ကို နှစ်သက်သည်။
အလုပ်လုပ်ရာ၊ ဈေးဝယ်ရာ၊ ပညာသင်ရာ တွင် ဒီမိုကရေစီ စနစ် ဖြင့် နေထိုင်ရခြင်းကို နှစ်သက် သည်။ အခြားသူတစ်ဦးမှ မိမိကို ဘာလုပ် ဟုစေခိုင်းခြင်း မပြုနိုင်ပါ။
အကယ်၍ တစ်ယောက်ယောက် က ဘာလုပ်လို့ စေခိုင်းတာကို နှစ်သက်ပါ သလား?
စစ်သားတွေ ညအချိန်မတော်လာပြီး ကိုယ့်ကို ခေါ်သွား မလားလို့ စိုးရိမ် စရာမလိုတာကို ပြည်သူများက လိုချင်ပါ သည်။
တကယ်လို့ စစ်သားတွေက မိသားစုထဲ ကတစ်ယောက်ယောက် ကို အဲဒီလို ခေါ်သွား ခဲ့ရင် ဝမ်းနည်း ဒေါသ ဖြစ်မှာမဟုတ်လား?
ပြည်သူများက သူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင် ကိုသူတို့ ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတာကို လိုချင်ကြပါသည်။ ပြည်သူများသည် သူတို့ကို တရားဥပဒေနဲ့အကာအကွယ်ပေးထားခံရတာကို နှစ်သက် ကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပြည်သူများသည် ဒီမိုကရေစီ စနစ်နှင့် နေ ထိုင်ခွင့်ရတာကို ပျော်ရွှင်ကြ ပါ သည်။ အလုပ်သမား၊ ကုန်သည်၊ ကျောင်းသူ/ကျောင်းသား အပါအဝင် ပြည်သူအားလုံး ၏ ဘဝ များသည် ဒီမိုကရေစီ စနစ်တွင် နေထိုင်၍ ပိုကောင်းပါသည်။
တစ်ခြားသူတွေ နှင့် မတူဘဲ ကွဲပြား ခြင်းသည် ဒီမိုကရေစီ စနစ်တွင် ပြသနာ မဟုတ်ပါ။
လူတိုင်း ညီတူညီမျှ ဖြစ်သည်။
မွေးရာပါ မသန်မစွမ်းဖြစ်၍ ဘီးတပ်ကုလားထိုင် သုံး ရကောင်းသုံးရမည်။
အာဖရိကန်နွယ်ဖွား အမေရိကန် ဖြစ်၍ အသားမဲကောင်းမဲ မည်။
ဒေသခံအမေရိကန် ကလေး တစ်ယောက်ကို ကြည့်ပါ။ သူ၏ အခြားသူများနဲ့ မတူ ကွဲပြားသော ဘာသာရေး ကို လူ တစ်ချို့ မှ ရီစရာ လုပ် ကောင်း လုပ်မည်။
ဒီမိုကရေစီ စနစ်တွင် “သူဟာ အသားမဲလို့ ငါတို့ နဲ့ ညီတူညီမျှ မဟုတ်ဘူး။ သူမ ဟာ မသန်စွမ်း လို့ ငါတို့ နဲ့ ညီတူညီမျှ မဟုတ်ဘူး။ ” လို့ မပြောရပါ။
နေရောင်ခြည်သည် ပြည်သူအားလုံးကို ညီတူညီမျှ အလင်းရောင်ပေးပါသည်။ အကြောင်း တစ်ခုခု နှင့် ကွဲပြား နေ သည်ကို ဂရုမစိုက်ပါ။
ဒီမိုကရေစီ စနစ်တွင် အကြောင်းတစ်ခုခု နှင့် ကွဲပြားခြားနား သော်လည်း လူတိုင်းသည် ညီတူညီမျှ ဖြစ်ပါသည်။ မည်သည့်ဘာသာ ကိုးကွယ်သည်ဖြစ်စေ၊ ဆင်းရဲသည်ဖြစ်စေ၊ ချမ်းသာသည်ဖြစ်စေ၊ မည်သည့်အသား အရောင် ဖြစ်စေ၊ ကျားမ မခွဲ၊ သန်စွမ်းခြင်း ရှိမရှိ မခွဲ၊ လူသား တိုင်းသည် ဒီမိုကရေစီ စနစ်တွင် သာတူညီမျှဖြစ်ပါသည်။
ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ် တွင် မွေးဖွားလာ သောလူသားတိုင်းသည် အရေးကြီးပါသည်။ အကြောင်းမှာ လူသားအားလုံးတွင် လူ့အဖွဲ့အစည်းကို အကျိုးပြုပေးနိုင်သော အကြောင်း တစ်စုံတစ်ရာကို ပိုင်ဆိုင်ကြ၍ ဖြစ်ပါသည်။
အကယ်၍ မိမိ ပိုင်ဆိုင်သော ပင်ကိုယ်စွမ်းရည် နှင့် တွေးခေါ်မှုများကို မဝေမျှ ပါက လူ့အဖွဲ့အစည်း သည် ထိုအရာများကို အသုံးချနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
ထိုသို့ဆိုရင် ဝမ်းနည်း စရာ ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
လူအများသည် ကွဲပြားခြားနား ကြပါသည်။
ဒေသခံအမေရိကန် ကလေး သည် ဘီးတပ်ကုလားထိုင်ပေါ် မှ မိန်းကလေး နှင့်မတူပါ။
ထိုကဲ့သို့ ကွဲပြားနေခြင်းသည် လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ပိုမို၍ သန်စွမ်းခိုင်မာ စေပါသည်။
အကြောင်းမှာ လူတစ်ယောက်တွင် မရှိသော အရည်အချင်းကို ကျန်တစ်ယောက်မှ ဖြည့်ဆည်း ပေးနိုင်၍ ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် ကွဲပြားခြားနားနေသော ကြောင့် လူတိုင်းတွင် မတူညီသော အရာများကို ပေးနိုင်စွမ်းရှိကြသည် ကိုသတိရပါ။
ထိုကဲ့သို့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ ကွဲပြားခြားနားခြင်း များကို လက်လွှတ် ဆုံးရှုံးစေရန် မသင့်ပါ။
အာဖရိကန်နွယ်ဖွား အမေရိကန် တစ်ယောက် ၌ ဒေသခံအမေရိကန် တစ်ယောက် နှင့် မတူသော အကြံတစ်ခု ရှိမည်ဟု ထင်ပါသလား?
သူတို့၏ဘဝ များသည် ကွဲပြား ခြားနားပါသည်။ သူတို့၏ အတွေ့အကြုံ များသည်လည်း မတူညီကြပါ။ ထို့အတူ ဘီးတပ်ကုလားထိုင်ပေါ် မှ မိန်းကလေး၏ အတွေ့အကြုံ သည် လည်း ဘီးတပ်ကုလားထိုင် မလိုသော တစ်ခြားသူ တစ်ဦး၏ အတွေ့အကြုံ နှင့် ကွဲပြား ပါ သည်။
လူသားတစ်ဦးချင်း၏ အရေးကြီးမှု တွင် အခြားအကြောင်း ပြချက်တစ်ခု ရှိပါသေးသည်။ အကြောင်းမှာ လူသားအားလုံး၌ အလွန်အဖိုးတန်သော “ခံစားချက်များ ၊ မျှော်လင့်ချက် များ နှင့် အိမ်မက်များ” ရှိကြ၍ဖြစ်ပါသည်။
ထိုသို့ “ခံစားချက်များ ၊ မျှော်လင့် ချက်များ နှင့် အိမ်မက်များ” ရှိခြင်း သည်ပင်လျှင် လူသားဖြစ်ခြင်း၏ အစိတ်အပိုင်း များဖြစ်ပါသည်။
အာဖရိကန်နွယ်ဖွား အမေရိကန် တစ်ယောက် သည်လဲ ကောင်းမွန် သော ဘဝ ကို လိုချင် မည်ဟု ထင်ပါသလား? သူ့မှာရော “ခံစားချက်များ ၊ မျှော်လင့် ချက်များ နှင့် အိမ်မက်များ” ရှိနေမှာလား? ဒေသခံအမေရိကန် တစ်ယောက် မှာရော?
သူမှာရော “ခံစားချက်များ ၊ မျှော်လင့် ချက်များ နှင့် အိမ်မက်များ” ရှိနေမှာလား? ဘီးတပ်ကုလားထိုင်ပေါ် မှ မိန်းကလေး သည်လဲ မိန်းကလေး ဖြစ်လို့အရေးမကြီး တော့ဘူးတဲ့လား? သူ့မှာလဲ ခံစားချက်ရှိပါသည်။
ဘီးတပ်ကုလားထိုင်နဲ့မို့ သူမ ဟာ သည် အရေးမကြီး တော့ဘူးတဲ့လား?
ဘီးတပ်ကုလားထိုင်နဲ့ အခြားမသန်မစွမ်းသူတွေမှာရော မျှော်လင့်ချက် နဲ့ အိမ်မက်များ မရှိကြတော့ဘူးလား?
သူမ သည် ဒုက္ခိတ ဖြစ်သော်ငြားလည်း တစ်ခြားသူတွေလိုဘဲ အရေးကြီးသူဖြစ်ပါသည်။
အကြောင်းမှာ သူမသည် လူသားတစ်ယောက် ဖြစ်နေ၍ ဖြစ်ပါသည်။
လူတစ်ယောက်သည် တစ်ခြားတစ်ယောက်ထက် ပိုပြီး အရေး ကြီးသည် ဟု မရှိပါ။
လူတစ်ယောက်သည် တစ်ခြားတစ်ယောက် နှင့် ကွဲပြားခြားနားပါသည်။
လူတစ်ဦးချင်းစီမှာ “ခံစားချက်များ ၊ မျှော်လင့် ချက်များ နှင့် အိမ်မက်များ” ရှိပါသည်။
ဒီမိုကရေစီ စနစ်တွင် လူတိုင်းသည် အရေးကြီးသူ ဖြစ်ပါသည်။
နေရောင်ခြည်သည် ပြည်သူအားလုံးကို အလင်းရောင်ပေးပါသည်။
ထို့ကြောင့် လူတစ်ယောက်သည် ဆရာဝန်ပညာကို ဆည်းပူးနိုင်သည်။ စာမေးပွဲ များ အောင်ရမည် ။ ပြီးလျှင် ဆရာဝန်အဖြစ် ပျော်နေနိုင်သည်။
တစ်ခါတစ်ရံ ဘာလုပ်ရမလဲ ဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်ဖို့ အတော်ခက်တတ် ပါသည်။
တစ်နေ့ စာသင်ခန်းထဲ က ကလေးတွေမှာ တစ်ချို့က ဘော်လုံးကစားချင်သည်။ တစ်ချို့က ခံတပ် ဆောက်တမ်း ကစားချင်သည်။
တစ်ချို့ က အဲဒါတွေ မလုပ်ဘဲ လမ်းလျှောက်ပြီး စိတ်ဝင်စားစရာ ပိုးကောင်လေးတွေ ဖမ်းချင်သည်။
ဆရာက အတန်းတစ်တန်းလုံး စုပြီး တစ်ခု ဘဲလုပ်ရမည်ဟု ပြောသည်။
သူတို့ ဘယ်လို ဆုံးဖြတ်ကြမလဲ?
အတန်းထဲ က ချမ်းသာတဲ့ ကလေး တွေက ကစားချင်တာကို အားလုံးကလိုက်ပြီး ကစားရမလား?
လက်သီးထိုး ပြီး နိုင်တဲ့သူ က ကစားချင်တာကို အားလုံးကလိုက်ပြီး ကစားရမလား?
အတန်းထဲက အသက်အကြီးဆုံး (သို့မဟုတ်) အတော်ဆုံး ကလေးက ကစားချင်တာကို အားလုံးကလိုက်ပြီး ကစားရမလား?
အထက်ပါ နည်းများမှ မည်သည့်ရွေးချယ်နည်းကို အကြိုက်ဆုံးဖြစ်ပါသလဲ?
အများအားဖြင့် ဆိုလျှင် ပိုက်ဆံ အရှိဆုံးသူ၊ အတော်ဆုံးသူ၊ လက်သီးထိုး အကောင်း ဆုံးသူ များမှ ဆုံးဖြတ်ခြင်း ကို လက်ခံချင်စိတ်ရှိကြမည် မဟုတ်ပါ။
ဒီမိုကရေစီ စနစ်တွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချ စရာရှိပါက မဲဆန္ဒပေး၍ ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြပါသည်။
ထိုသို့ မဲပေး၍ ဆုံးဖြတ်ချက်ချ သောအခါတွင် သွေးထွက်သံယိုမှု များကို ရှောင်ရှားနိုင် ပါသည်။ ပြည်သူများ အားလုံး၏ အသံကို ကြားနိုင်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် ဒီမိုကရေစီ စနစ်တွင် မဲဆန္ဒ ဖြင့် ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ပြုလုပ်ပါသည်။
The Democracy by Dr. Jerry Dean Epps
လက်မ ထောင်ရင်း လည်ပင်းဆန့်လို့ မျက်မှန်သုတ်ကာ ဆက်ရန်မျှော်နေပါသည် ။
အစ်မလတ်ရေ.. ကျနော်ဖတ်ပြီး ကူးသွားပြီနော်၊ မသိသေးတာတွေ သိလိုက်ရတဲ့အတွက် ကျးဇူးတင်ပါတယ်နော်၊
NLD ကဆရာတွေ ဘာသာပြန်ပြီး စာအုပ်ထုတ်ရောင်း
ကိုကြီးမိုက်ရေ – အကြံလေးက ကောင်းပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဒီစာအုပ်ကို အခုချိန်မှာ စီစစ်ရေးက တရားဝင် ခွင့်ပြုမယ် မထင်သေးပါဘူး။
နောက်ပြီး NLD ကို အားပေးမဲ့ လူတွေ ကို ရောင်းမှာထက် လူတွေ အားလုံး ဖတ်နိုင်လေ ကောင်းလေမို့ တစ်ပါတီ မှာဘဲ ချုပ်မထားသင့် ဘူးလားလို့။
အရီး က အလကားတောင်ဝေချင်တာ။
အခြေခံသဘော (၄) – တစ်ခြားသူများကို မထိခိုက်သမျှ ကာလပါတ်လုံး မိမိဘဝကို နှစ်သက်သလို နေထိုင်နိုင်သည်။
အဲဒီအချက်ကတော့ သိပ်ကျယ်ပြန့်တယ်… အခွင့်ကောင်းယူလို့ အလွယ်ဆုံး ယူလည်းယူနေဂျတဲ့ အရာဖြစ်တယ်။ ဟိုဖက်ဒီဖက် နှစ်ဖက်စလုံး လိုရာဆွဲချဲ့ယူရလို့ ပြသနာအရှိနိုင်ဆုံးလို့လည်းမြင်ပါတယ်။ ဘယ်ယဉ်ကျေးမှု သတ်မှတ်ချက်စံနှုန်းနဲ့ ကိုက်ကြည့်မလည်း အခရာကြမယ်။ လစ်ဘရယ်အစွန်းနဲ့ ကွန်ဆားဗေးတစ်အစွန်း…၊ ရုပ်ဝါဒအစွန်းနဲ့ နာမ်ခံစားမှုအစွန်း အစွန်းနှစ်ဖက် အားပြိုင်မှု ထင်ရှားမှုအရှိနိုင်ဆုံး နယ်ပယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့နေရာဒေသတိုင်းလိုလိုမှာ ဥပဒေချိုးဖောက်မှု လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် အန္တရယ်လို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဆေးခြောက်ကို နယ်သာလန်နိုင်ငံ အက်စတာဒမ်မြို့က ဆိုင်တွေမှာ တရားဝင် ရှုလို့ရတယ်။ ခလေးသူငယ် ညစ်ညမ်းမှုအဖြစ် သတ်မှတ်တဲ့ ဆယ်နှစ်ပတ်ဝန်းကျင် မိန်းခလေးတွေ အတွင်းခံနဲ့ လိင်စိတ်ဆွဲဆောင်နေတဲ ဓာတ်ပုံများကို ဂျပန်နိုင်ငံမှာ တရားဝင် ထုတ်လုပ်ရောင်းချခွင့် ရှိတယ်..။ အစွန်းရောက် မွတ်စလင်နိုင်ငံများမှာ ကိုယ့်သမီး ညီမ အမ တူမကြောင့် မိသားစု အရှက်ကွဲရတယ်ဆိုရင် သတ်ပစ်လို့ ရာဇဝတ်မှု မမြောက်ဘူး။ သေစားသေစေ… ကိုယ့်သမီး ညီမကို မုဒိမ်းကျင့်ရင် သူသမီး ညီမကို ပြန်မုဒိမ်းကျင့်ခွင့်ရှိတဲ့ eyes for eyes ကိုဓဥပဒေတွေလည်း အဲဒီဒေသတွေမှာ ရှိဆဲပဲ..။ တဖက်မှာကြတော့ ကိုယ်ခလေးကို အော်ငေါက်ဆုံးမရင်တောင် ရဲခေါ်တိုင်လို့ရတဲ့စနစ် အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ ရှိတယ်..။ အလယ်တန်းကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူဘဝနဲ့ လွတ်လပ်စွာ လိင်မှုကိစ္စခံစားနေတာကို သဘာဝဆိုပြီး မျက်ကွယ်ပြုထားလာကြတာလည်း တွေ့နေရပြီ..။
လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတာ ကောင်းတဲ့အရာဖြစ်ပေမယ့် ဘယ်အတိုင်းအတာထက် ကျော်သွားရင် ပတ်ဝန်းကျင်ကို အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေလဲဆိုတာ စည်းတားပြဖို့ခက်တယ်…။ လစ်မစ်ဆိုတာ လူတဦးနဲ့တဦး တဖွဲ့နဲ့တဖွဲ့ မတူဘူး..။ အခြေခံ လူ့အခွင့်အရေးလို ဖွင့်ဆိုပြပြန်တော့လည်း သိပ်ပျမ်းမျှဆန်လို့ ငြင်းရခုံရပြန်ရော…။ ကွန်ဆားဗေးတစ် လုပ်ရပ်အမှားမျာကတော့ သမိုင်းတလျောက် ထင်ရှားလွန်းလို့ ပြောလိုက်ရင် ထင်းကနဲ မြင်နိုင်တယ်..။ လစ်ဘရယ်အမှားကြတော့ အခုမှရှေ့တိုး သွားနေဆဲဆိုတော့ မထင်ရှားသေးဘူး၊ ကောက်ချက်အဆုံး ဆွဲပြလို့ မဖြစ်နိုင်သေးဘူး..။ အဲဒါကို ဟုတ်နေတဲ့ လမ်းကြောင်းလို့ အယူမလွဲဂျဖို့ပါ..။
ကျွန်မ good citizenship အကြောင်း ပါ ရေးချင်နေပါတယ်။
ကကြောင်ကြီး ကို လွှတ်တော် ထဲ ဘယ်လိုပုံ နဲ့ သွင်းရမလဲ အကြံ ထုတ်လိုက်ဦးမယ်။ ;-)
ကျေးဇူး ကမ္ဘာပါ အရီးခင်လတ်ခင်ဗျာ
ဖတ်မှတ်၊ ဆေ့ဖ် လုပ်သွားပါတယ်ခင်ဗျာ
အရီး ဘာသာပြန်သမျှ အပိုင်းတိုင်းကို ကျွန်တော့်ဖေ့စ်ဘွတ်မှာလည်း document လုပ်ပြီး
ဝမ်းပန်းတသာ နဲ့ ကျေးဇူးတင်စွာ ခွင့်ပေးပါတယ်။
ဒါဆို အရီးတို့ အချိန်ပေးရတာ တန် ပါတယ်။
လူတွေ များများ ဖတ်လေ ပိုကောင်းလေ ပါဘဲ။
မူရင်း စာအုပ်နာမည်လေး နဲ့ စာရေးသူကို တော့ ဖော်ပြပေးပါနော်။ :-)
ဘာသာပြန်သူ အမည်တော့ မလိုပါဘူး။
ကော်ပီလုပ်ပြီး ၀ါ့ဒ် ထဲမှာ ပြောင်းထည့်တော့
အရီး insert နဲ့ ပို့စ်ထဲထည့်ထားတဲ့ စာလုံးတွေကျတော့
ပုံမှန်ထက်မှိန်နေပြီး underline လည်းဖြစ်နေတယ်
ဘယ်ဘက်ဘေးမှာလည်း ဒေါင်လိုက် လိုင်းတစ်လိုင်းပေါ်နေတယ်
ဘယ်လိုမှ ပြင်လို့မရလို့ .. နည်းလေးပြောပြပါအုံး
ဒါမှမဟုတ် boaungdinplp@gmail.com ကို
ရွာစား ကျော် ရေ ဒီစာတွေ ကို အဒိုဘီ ပြောင်းပြီး ပို့ပေးမည်ဟု ရဲရဲကြီး ဂတိပေးပါသည်။
ဒီထဲမှာလဲ အဲဒီ pdf ကို တင်ထားပေးလို့ ရလားမသိ?
အရီးကို အီး ပိုကျွမ်း တဲ့ မာစတာ တစ်ယောက် ကပါ ကူပေးနေတာမို့ ဘာသာပြန်ရာမှာ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး အမှားတွေ မပါလောက်ဘူးလို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
(ပြည်သူများက သူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကို သူတို့ ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတာကို လိုချင်ကြပါသည်။)
ညီမျှတဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေ(အခွင့်အရေးလို့မပြောပါ) မရခဲ့တဲ့ ဘ၀တွေ အတွက်ပေါက်ကွဲခဲ့ကြရတာပါ။
ပိုးစုန်းကြူးလေးတွေမှာလည်း ကိုယ်ပိုင် အလင်းရောင်ရှိပါတယ်။
အခြေခံသဘော (၄) – (တစ်ခြားသူများကို မထိခိုက်သမျှ ကာလပါတ်လုံး မိမိဘဝကို နှစ်သက်သလို နေထိုင်နိုင် သည်။)
ဘယ်အနေမှာ ထိခိုက်မလဲဆိုတာ အမှန်တော့ လူတိုင်းမှာ sense ရှိပါတယ်။
ကောက်ကျစ်တဲ့ ပညာရှိတွေ လက်တစ်လုံးခြားလုပ်ရင်တော့ ခံရမှာပေါ့။
ဒါ့ကြောင့် ဒီမိုကရေစီ မတိုင်မီ awareness လေးအရင် သွင်းပေးသင့်ပါတယ်။
အဂတိ ၄ပါးကင်းတဲ့ စစ်မှန်တဲ့ မဲလည်း ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။
ဒီလိုစာမျိုးတွေ များများဖတ်ကြဖို့လိုအပ်ပါတယ် … အမှန်ပြောရရင် ဒီမိုကရေစီဆိုတာ ဘာမှန်းသေချာမသိတဲ့သူတွေအများကြီးပါ (ကျွန်မလဲပါပါတယ်) …
စာအုပ်တစ်အုပ်လုံး ဘာသာပြန်ပြီးသွားရင် pdf ဖိုင်နဲ့လုပ်ပြီး သိမ်းထားချင်ပါတယ် … သူများတွေကိုလဲ ဖတ်ခိုင်းမယ် …
အရီးလတ် မအားတဲ့အထဲက အချိန်ပေး ရေးပေးထားတာ ထင်ပါတယ်။ ဆက်ရန်တွေလည်း မျှော်နေပါ့မယ်။
ဒီစာတန်းကို.. မြန်မာမှုပြုပြီး ပြန်ညှိပြင်သွားချင်တယ်..
မြန်မာပြည်က လောလောဆယ်.. ဒီမိုကရေစီနည်းကျ အခြေခံဥပဒေ မဟုတ်နေတော့ကာ.. ဒါကအလိုအလျှောက်ပယ်ပျက်ပြီး ဖြစ်နေပါတယ်..။
ပြောရရင် မြန်မာပြည်က.. အခြေခံဥပဒေကို.. ၂ခါဖျက်ခဲ့ပြီးပြီ..။
1947 Constitution 1948 to 1962 = ၁၄နှစ်
The 1947 constitution drafted by Chan Htoon and was used from the country’s independence in 1948 to 1962, when the constitution was suspended by the Socialist Revolutionary Council, led by Ne Win. The national government consisted of three branches: judicial, legislative and executive. The legislative branch wasabicameral legislature called the Union Parliament, consisting of two chambers, the 125-seat Chamber of Nationalities (လူမြိုးစုလှတျတျော Lumyozu Hluttaw) and the Chamber of Deputies (ပွညျသူ့လှတျတျော Pyithu Hluttaw), whose seat numbers were determined by the population size of respective constituencies.
1974 Constitution 1974 to 1988 = ၁၄နှစ်
ဒါတောင်အခြေခံဥပဒေဆိုတဲ့ အမည်နဲ့ ရှိနေလို့သာ..
မတိုင်ခင်.. အနော်ရထာလက်ထက်ကစပြီး.. လူထုအများစုသဘောနဲ့ဘာမှလုပ်ခဲ့တာမဟုတ်..
ဘုရင်တွေစိတ်ကြိုက်ချယ်လှယ်ပြီး.. အဲဒီအောက်မှာ. မြန်မာတွေက.. မိုးကျရွှေကိုယ်တွေကို.. ဘုရားထူးခေါင်းငုံ့နေခဲ့ရတာ…
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်နာမ်စားပြု.. ခေါ်ရတာတွေတောင်.. ကျေးတော်မျိုး ကျွန်တော်မျိုး..ကျွန်တော်။ ကျွန်မတွေဖြစ်လို့…
အဲဒါကို.. လူလေး..မောင်မင်း..ယဉ်ကျေးလှပါတယ်ဆိုပြီး.. ခေါင်းအမွေးလေးသပ်..
သူကြီး မလောပါနဲ့လေ။ နဲနဲလေးတော့ စိတ်ကလေးကို ဆန့်ထားမှပေါ့။ ;-)
အခုလဲ မှားတာတွေကို သိပြီး ပြင်နိုင်ဖို့ အခွင့် ရဖို့လိုတာပါ။
ကျွန်မတို့ ဒီလောက် မညံ့ကြပါဘူး သူကြီးမင်းရယ်။
အခွင့် မရကြသေးလို့ပါ။ :-)
ပထမ တုန်းက အားလုံး ပေါင်းတင်လိုက်ရင် ပျင်းပြီး အားလုံးကို သေသေချာချာ မဖတ်နိုင် များဖြစ်မလား လို့ တွေးမိပြီး ခွဲခွဲ တင်ဖို့ စိတ်ကူးမိတာ။
နောက် ဒုတိယ တွေးမိတာက အစ်မပဒုမ္မာ ရဲ့ မှတ်ချက် ကို ကကြောင်ကြီး ရဲ့ ချွန်တွန်း မှာ တွေ့လိုက်ပြီး ဒုတိယ အတွေး ဝင်သွား လို့ မနက်ဖြန် မှာ အားလုံး ကို တင်နိုင်ဖို့ ကြိုးတွေ ဝါးနေပါတယ်။
အဲဒါရဲ့ နောက်မှာ “good Citizenship” ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို ပါ ဆက်ပြီး တင်ဖို့ စိတ်ကူး လိုက်မိလို့ပါ။
ဒီတစ်ခါ တော့ ၈၈လို မဖြစ်တဲ့ ဘက်ကနေ ကျွန်မ လောင်းပါတယ်။ ဘယ်သူလောင်းမလဲ။
ဒါပေမဲ့ သတိဆိုတာ ပိုတယ် မရှိပါဘူး။
အခုအချိန်က ဘာကိုမှ အတိမ်းအစောင်း အထိအခိုက် မခံ တဲ့ အဖြစ် ဆိုတာ အားလုံး သိထားသင့်ပါတယ်။
NLD မှ လူများ မှန် အမြဲကြည့်နေဖို့ လိုပါတယ်။
ကိုယ်မကြိုက်ခဲ့တဲ့ ပုံစံ တွေ ကိုယ့်ကိုယ်ပေါ်မှာ၊ အမူအယာမှာ၊ အတွေးအခေါ်တွေမှာ ဖြစ်မနေစေဖို့။
ဦးဦးပါလေရာ၊ ကထူးဆန်း၊ ရောင်ခြည်၊ ကကြီးမိုက်၊ MTY ၊ ရွာစားကျော်၊ ကကြောင်ကြီး၊ အစ်မပဒုမ္မာ၊ ဝေဝေ၊ ဂီဂီ၊ Pooch လေး သူကြီးမင်း တို့ ကို မှတ်ချက်လေး တွေအတွက် ကျေးဇူးပါ။
မလတ်ရေ- အပြန်ပြန် အလှန်လှန်ဖတ်သင့်တဲ့စာမို့လို့ သေသေချာချာဖတ်လိုက်ပါဦးမယ်။
အခုကိုယ့်နိုင်ငံလည်း ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို သွားနေတာမို့ ဒီမိုကရေစီအကြောင်း ဂဃနဏ သိထားကြဖို့ လိုနေတဲ့အချိန်မှာ လိုက်ဖက်တဲ့ ရာသီစာလေးမို့ ကျေးဇူးအကြီးကြီး တင်ပါတယ်လို့
မြန်မာတယောက်အနေနဲ့.. ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေမှာ နှစ်ရှည်နေဖူးသူအနေနဲ့တော့… လူသားတွေအတွက်အလွန်(အလွန်)လိုအပ်တဲ့.. အခြေခံသဘောလို့ထင်မိတယ်..
အိန္ဒိယတိုက်ငယ်မှာ.. အာသောကမင်းကြီးနောက် တက်တဲ့ဘုရင်တွေဟာ.. ဟိန္ဒူဘုရင်တွေပါ..
အရှေ့တောင်အာရှတခုလုံးကို.. ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာ လွှမ်းမိုးခဲ့တယ်..။ (ဗောရောဗုတော၊ အန်ကောဝပ်၊ ပုဂံပြည်တွေကြည့်ရင် မြင်သာပါတယ်)
ဟိန္ဒူဘာသာမှာ.. ဇတ်(လူအဆင့်အတန်း) အလွန်ခွဲပါတယ်..။
ဒါဟာ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုထဲ.. (ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ရောသမမွှေ)ထဲထဲဝင်ဝင်ရောက်တဲ့အခါ.. လူတန်းစားတွေကွဲထွက်သွားပြီး.. လူချင်းမတူ.. မြင့်မြတ်တာ.. နိမ့်ကျတာတွေဖြစ်ကုန်တယ်လို့.. မြင်မိတယ်..။ မသိစိတ်ထဲကို.. စွဲနစ်နေအောင် အမြစ်တွယ်နေပါတယ်..။
ရှေးပဝေဏသီခေတ်က.. ပြသနာကြီးကြီးမားမားမဟုတ်ပေမဲ့.. ဒီလိုခေတ်မှာ.. ဒါဟာ.. လူတန်းစားပဋိပက္ခဖြစ်တော့တာပဲ..
စံနစ်တကျ.. ရာစုနှစ်ချီ အမြစ်တွယ်နေတဲ့.. ရှေးစွန်းစွဲ ကွန်ဆာဗေးတစ်တွေဟာ.. အင်အားများတဲ့အခါ.. တိုင်းပြည်ကို.. အထွေထွေတိုးတက်မှုတွေကဆွဲချပါတယ်….
အာဏာရှင်စံနစ်ကို မွေးထုတ်ပါတယ်..။ ငါနဲ့မတူ ငါ့ရန်သူ ဖြစ်စေပါတယ်..။ အနိုင်ကျင့်ဗိုလ်ကျပါတယ်..။
အခြေခံသဘော (၂) – လူတိုင်း ညီတူညီမျှ ဖြစ်သည်။ အခြေခံသဘော (၃) – လူတိုင်း အရေးကြီး သည်။
ဒါကို နှလုံးသွင်းပြီး အလုပ်လုပ်ကြည့်..လူမှုဆက်ဆံရေးတွေမှာ လက်တွေ့အသုံးချကြည့်ကြစေလိုတာပါ..
ဒီမိုကရေစီရဲ့ အရသာကို.. မြင်ကြရလိမ့်မယ်..။
သူကြီးမင်း ရှင့် (ရိုက်သွင်းထားသည့် အရိုးစွဲ နေသော အခေါ် (သို့) ရိုသေထိုက်သူကို ခေါ်သည့် မိမိတို့ ယဉ်ကျေးမှု) jk ;-)
ညက အိပ်ချင်မူးတူး ဖြစ်နေပြီမို့ သူကြီးရဲ့ ပထမ ဆွေးနွေးချက်ကို ဘာဆိုလိုနေတာလဲ သိပ်အထာမပေါက် ခဲ့ပါ။
သူကြီး တစ်ယောက်တော့ ပေါက်နေပြီ လို့ဘဲ တွေးမိတာ။ (မပြီး ခင် ဗမာ မြင် သွားတာ) အဟိ :-)
အခု တော့ သူကြီးမင်း ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက် ကို သိပါပြီ။
သူကြီးရဲ့ ဒီလို ဆွေးနွေးချက်လေးတွေ က ကျွန်မတို့ ချစ်သောပြည် ရဲ့ လက်တွေ့ဘဝ ပါဘဲ။
အဲဒါကို တွဲမြင် နိုင်အောင် အင်အား ဖြည့်ပေးတဲ့ အတွက် တကယ်ကြီး နဲ့ အကြီးကြီးသော ကျေးဇူး ကို တင်ပါတယ်။
စာအုပ်မှာ ရေးထားတဲ့ သူများနိုင်ငံ က အကြောင်း ပုံပြင် အစား သူကြီး ရဲ့ ဆွေးနွေးချက် တွေ ဖြည့်ပြီး အဒိုဘီ ပြောင်း ပြီး ဖြန့်ရရင် ပိုပြီး ရှင်းလင်းပီပြင် သွားမယ်။
လေး မက ငါးရော ခြောက်ပါ စားပါတယ် သူကြီးရေ့။
စာကောင်းပေမွန်တွေ ကို အလွယ်တကူဖတ်ခွင့်ရလို့
ကျွန်မတို့ချစ်သော နိုင်ငံ အတွက် ကျွန်မတို့ ဖြစ်စေချင်သော တင့်တယ်လှပသော ဒီမိုကရေစီ စနစ်ကြီး အမှန်အကန် ပေါ်ထွန်း လာစေရန် ကိစ္စတွင် ……………..
သူကြီးမင်း ၏ အင်မတန်မှ ကြင်နာလှ စွာသော ဤကဲ့သို့အားပေးကူညီ မှု ကို လှိုက်လှဲဝမ်းသာစွာ ဖြင့် ကျေးဇူးဥပကာယ တင်ရှိပါကြောင်း။
သူကြီး မင်း နှင့် တစ်ကွ ကျွန်မတို့ ရွာသူ/သား အားလုံး အပါအဝင် မြန်မာပြည်/သူ ပြည်သား များ စိတ်ချမ်းသာ-ကျန်းမာ၊ ကိုယ်ချမ်းသာ-ကျန်းမာ စွာ ဖြင့် လွတ်လပ်ခြင်း အရသာကို တည်ကြည် မြင့်မားသော နိုင်ငံကြီးသား စိတ်ဓာတ်များဖြင့် ခံစား၊ စံစား နိုင်ကြ ပါစေ သောဝ်။
No Democracy …………. No Freedom
Know Democracy ………. Know Freedom
Church တစ်ခုတွင် တွေ့မိ သော “No God …. No Love – Know God ….. Know Love”
စာတန်း ကို ခိုးချ ထားပါသည်။
ကြိုက်လို့ share သွားပါတယ်။ဗျာ….။
လေးလေးစားစား ဖတ်ပြီး မှတ်သားထားပါတယ် အရီးလတ်ရေ..
အောက်ဆုံး စာအုပ်ဒီဇိုင်းက အချက်လေးချက်နဲ့များ ပြည့်ဝလို့များ ဒီမိုကရေစီ စစ်စစ်ဖြစ်ပြီဆိုခဲ့ရင်..
ကျနော်တို့ဆီမှာလည်း မျှော်လင့်ချက်အဆင့်ကို ကျော်စပြုနေပြီဆိုတော့..ကျန်၃ချက်သာမယိုင်သွားခဲ့ရင်..
အခုလို အပင်ပန်းခံ ဘာသာပြန်ပေးတဲ့ အစ်မကို ကျေးဇူးပါဗျာ။
အန်တီခင်ဗျား ။ အခုမှဘဲ အန်တီ့ ပို့ စ် ကို ဝင်ကြည့်ဖြစ်ပါတယ် ။ အန်တီ့ စာများသည် အေးအေးဆေးဆေး အချိန်ယူဖတ်ရမည့် အမျိုးဖြစ်သည့်အတွက် ၊ ကူးယူသွားပါတယ် ခင်ဗျ ။ အန်တီ့ ကောင်းမှုကြောင့် ၊ ဒီမိုကရေစီ ၏ အဓိပ္ပါယ် ကို သိခွင့်ရတော့မည် ဖြစ်ပါကြောင်း ပါ ခင်ဗျား ။
မသိတာကိုဝေမျှပေးတဲ့ ရှင်းပြပေးတဲ့ အမလတ်ရေကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်ဖတ်ရှူသွားပါကြောင်း